၂၀၁၅ အတွက်သင်၏ Caliber စာကြည့်တိုက်ကိုညှိနိုင်ရန်အတွက်အချက် ၅ ချက် | eReaders အားလုံး
၂၀၁၅ အတွက်သင်၏ Caliber စာကြည့်တိုက်ကိုညှိရန်အတွက်အချက် ၅ ချက်
Joaquín Garcia က | | caliber, eBooks, Software များ
ကျနော်တို့နှစ်သစ်ကိုစတင်သည်အထိတစ်လအောက်သာကျန်ရှိပြီးများစွာသောသူတို့သည်လာမည့်နှစ်အတွက်ပြည့်စုံမည့်ကောင်းသောဆန္ဒများသို့မဟုတ်ရည်ရွယ်ချက်များစာရင်းနှင့်အတူစတင်ပြီးဝိုင်း ၀ င်နေကြသည်။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးလှပသည်။ ၎င်းသည်မပြည့်စုံသော်လည်း၎င်းသည်လာမည့်နှစ်အတွက်သာရည်မှန်းချက်ထားရန်ယနေ့ရည်မှန်းချက်ထားလိုသည်။ သို့သော် ၂၀၁၄ မကုန်မီကျွန်ုပ်တို့၏စာဖတ်ခြင်းဘ ၀ ကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေမည့်ရိုးရှင်းသောလုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အပေါ်အခြေခံသည် လာမည့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်စာဖတ်ခြင်းအသစ်နှင့်ပြည့်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ Caliber ၏စာကြည့်တိုက်ကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ပါ။
ဤအချက် ၅ ချက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ebooks စာကြည့်တိုက်တွင်ပိုမိုတိကျသောရှာဖွေမှုများကိုပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့၏စာကြည့်တိုက်ကိုညှိနှိုင်းပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ Caliber ရလဒ်ကောင်းတစ်ခုရရှိစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စာကြည့်တိုက်သို့လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အဆင့်အချို့ကိုစာရင်းပြုစုမည်။
ပလပ်အင်များနှင့်ပရိုဂရမ်ဗားရှင်းအားလုံးကိုအသစ်ပြောင်းပါ။ ပထမ ဦး ဆုံးလုပ်ရမယ့်အချိန်နှင့်အချိန်ကာလနီးပါးနီးပါး Caliber နှင့်၎င်း၏ plugins များ update လုပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လုံခြုံရေးကိုတိုးမြှင့်စေရုံသာမကအမြန်နှုန်းနှင့်ပုံစံများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာစီမံခန့်ခွဲရန်လည်းဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းမည်သည်ကိုရှာဖွေရန်ဤအရာကိုစစ်ဆေးနိုင်သည် ဝဘ်.
ebooks ၏ပုံတူများကိုရှောင်ပါ။ Caliber ဖွဲ့စည်းပုံ၏ပုံမှန်အားဖြင့်အရာတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့တင်သွင်းသော ebook တစ်ခုစီအတွက်ပုံတူတစ်ခုဖန်တီးခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ebook သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ရှိပြီးဖြစ်သည်ဆိုလျှင်ရေရှည်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာကြည့်တိုက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာကိုနှေးကွေးစေသည်။ tab ထဲမှာ ဦးစားပေး ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်သည်။
အဖုံးမရှိဘဲ ebook မရှိပါ. သင်၏မျက်စိနှင့်အရင်စားသည်ကိုသင်သည်ကြားရပြီလော။ ကောင်းပြီ၊ စာဖတ်ခြင်းတွင်အတူတူပင်ဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်မည်သည့် ebook ကိုမျှအဖုံးမထားပါနှင့်၊ အထူးသဖြင့်ခေါင်းစဉ်များသို့မဟုတ်အထူးသဖြင့် ebooks များကိုရှာဖွေသောအခါသင့်အတွက်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ၎င်းတွင် rss သတင်းပါ ၀ င်သည်။ အကယ်၍ သင်လုပ်နိုင်လျှင်၎င်းကိုပုံနှင့်ချိတ်ဆက်ပါက၎င်းသည်ပိုမိုအမြင်အာရုံနှင့်ကိုင်တွယ်ရန်ပိုမိုမြန်ဆန်လိမ့်မည်။
ebook နှုန်းအနည်းဆုံးအမျိုးအစား။ စာအုပ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ebook မှရရှိသောတိုးတက်မှုများအနက်တစ်ခုမှာအမျိုးအစားများနှင့် tags များကို ebook နှင့်မည်သည့် browser မဆိုသုံးနိုင်သောဒြပ်ထုများချိတ်ဆက်နိုင်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ metadata tab ကိုသွားပြီးအနည်းဆုံးအမျိုးအစားတစ်ခုနှင့် / သို့မဟုတ် tag ထည့်ပါ။ အကောင်းဆုံးကတော့, tags များနှင့်အမျိုးအစားများစာရင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးပြီးကျွန်ုပ်တို့ရှိသည့် ebook တစ်ခုစီတွင်ထည့်ပါ။
လုပ်ရန်သင်၏စာရင်းစာရင်းကိုဖျက်ပါ။ များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စာဖတ်စာရင်းသည်ပိုကြီးလာသည်နှင့်အမျှဤအမျိုးအစားကိုအသုံးမကျစွာဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ ဒါကိုလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးကိုဒီစာရင်းကိုရှင်းလင်းဖို့နဲ့ဒီစာမျက်နှာကိုပေါ့စေဖို့ထုတ်ကုန်တွေဆီကိုတောင်မှအီးမေးလ်ပို့ဖို့ပဲ။ ၎င်းသည်မိုက်မဲပုံရသော်လည်း Caliber သည်ဤအမျိုးအစားကိုကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်ပေးသည်။ ၎င်းသည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုမှတ်ဉာဏ်ထဲသို့ထည့်စေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအဆင့်များကိုလိုက်နာပါကကျွန်ုပ်တို့၏စာကြည့်တိုက်ကိုပေါ့စေသည့်အပြင် tags နှင့်အဖုံးများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှာဖွေမှုများကိုအရှိန်မြှင့်နိုင်သည်။ ဤအရာအားလုံးသည်ရိုးရှင်းသောအလုပ်တစ်ခုမဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့မည်သို့မြင်သနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ebooks နှင့် document များစွာကိုစုဆောင်းမိလျှင်၎င်းသည်အလွန်ခက်ခဲပြီးအခြားတစ်နှစ်ထက် ပို၍ ကြာရှည်နိုင်သည်။မစဉ်းစားပါနဲ့?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » Software များ » caliber » ၂၀၁၅ အတွက်သင်၏ Caliber စာကြည့်တိုက်ကိုညှိရန်အတွက်အချက် ၅ ချက်
တက်ဘလက်အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်လားရှိလားသိလား။ ငါတွေ့ခဲ့တာကတော့တချို့အတုတွေ (သို့) အရမ်းမသေချာသောဗားရှင်းတွေထက်ဘာမှမရှိဘူး။ အခုငါအဲဒါကို pc ထက်ပိုပြီးသုံးနေတဲ့တက်ဘလက်မှာရှိနေချင်တယ်။
စကားမစပ်ဒီစာမျက်နှာကိုကျွန်တော်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ သင်ပေးလိုက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်အားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်းကိုဒီမှာမကြာခဏတွေ့မြင်နေမှာပါ။
Nolimbook နှင့် Nolimbook +, Carrefour eReaders တို့သည်ယခုစပိန်တွင်တရားဝင်ဖြစ်သည်
၎င်းတို့သည် Ignotus Awards 2014 ၏ဆုရရှိသူများဖြစ်သည်